Nepal Canada News|News from Canada/Nepal | » ‘यो सरकारसँग कुनै भिजन नभएको सरकारजस्तो लाग्यो’- शशांक कोइराला ‘यो सरकारसँग कुनै भिजन नभएको सरकारजस्तो लाग्यो’- शशांक कोइराला – Nepal Canada News|News from Canada/Nepal
अन्तर्वार्ता नेपाल समाचार
‘यो सरकारसँग कुनै भिजन नभएको सरकारजस्तो लाग्यो’- शशांक कोइराला
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले धमाधम विभाग विस्तार गर्न थालेका छन्। यता उनको विरोधमा उनी इतरका नेताहरु बैठक गरेरै भर्त्सना गर्नेक्रम पनि बढेको छ।
१३ औं महाधिवेशनमा पौडेल प्यानलबाट महामन्त्री बनेका बीपीपुत्र शशांक कोइराला पनि पछिल्लो समय देउवाको चर्को विरोधमा उत्रिएका छन्। तीनै तहको निर्वाचनमा नराम्ररी हार ब्योहोरेका जिम्मा देउवामाथि थोपरेको बेला महामन्त्री शशांकले सभापतिको बचाउ गरेका थिए। आउँदो महाधिवेशनै सन्दर्भमा महामन्त्री शशांक कोइरालासँग गरेको कुराकानी :
विश्व कोभिडको संक्रमणमा छ। काँग्रेसमा आफ्नै किसिमको रोग छ, संक्रमण छ, कसरी स्वस्थ हुन्छ पार्टी?
तर, पार्टी नै बिरामी छ त। पहिले आफू ठीक हुनु पर्ने होइन र?
गुट उपगुट हट्ने कुरा त पुरानै कथा होइन र काँग्रेसको?
शेरबहादुरजी आफै गुट बनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ गुटको अन्त्य? त्यस हिसाबले उहाँ जानुभएन। आफ्नै मान्छेलाई मात्र विभागका प्रमुख बनाउनुहुन्छ।
उहाँ त सबैको सभापति हो नि। टिकट वितरण गर्दा त्यो त हाम्रो मान्छे हैन भन्नुहुन्छ उहाँ। सभापतिले त्यसो भन्ने हो त?
त्यसो भए भद्रगोल छ पार्टीभित्र?
पार्टीमा कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ विरोधमात्र गर्नुपर्दा?
एकातिर विभाग गठन, अर्कातिर बैठक बहिस्कार दोहोरो खेल भएन र?
सभापतिले विधान मिचेर काम गर्नु भएपछि विरोध गर्नैपर्‍यो नि। विभागहरु चार वर्ष बनाउनु भएन। जब महाधिवेशनको मिति तोक्यो अनि विभाग बनाउनुभयो। ६ महिनामा के काम गर्छ विभागले? पहिले नै बनाएको भए कति काम हुन्थ्यो? त्यसैले हामीले बहिस्कार गरेका हौं। यसले आचारसंहिता पनि उल्लंघन हुन्छ।
भागभण्डा नमिलेर बहिस्कार गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि त छ?
सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?
निशान छाप परिवर्तन गरी देशभक्ति काम त गर्‍यो नि सरकारले?
यस्तो बेथिति देख्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस आफैँ कता हराएको जस्तो देखिन्छ त?
हाम्रो नेतृत्व पनि ठीक भएन। प्रत्यक्ष शेरबहादुरजीलाई भनेजस्तो हुन्छ। तर, एक्चुअल्ली हाम्रो नेतृत्व नै ठीक भएन। हामीले प्रतिनिधिसभामा राम्रैसँग कुरा उठाएका छौं। हाम्रो संख्या सानो भयो होला। मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापाजीहरुले आवाज उठाइरहनु भएको छ, उपस्थिति बलियो नभए पनि। शेरबहादुरजीको हबनबिङ छ। उहाँ ओलीजीसँग देउवाको बेलाबखत भेट हुन्छ। के के गर्नुहुन्छ?
राति राति गएर ओलीजीलाई भेट्नुहुन्छ। ओलीजीले भनिसक्नुभयो – शेरबहादुरजी भएर हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। त्यसैले अब पनि सभापति उहाँ नै हुनुपर्छ। हाम्रो महाधिवेशनमा ओलीले हस्तक्षेप गर्छन्, गर्छन्। किनकि उहाँलाई शेरबहादुरजी नै चाहिएको छ।
त्यसो भए काँग्रेसको भूमिका के त?
अधिवेशन आउँदैछ। यो महाधिवेशन किन महत्वपूर्ण छ भने नेतृत्व फेर्ने मात्र हैन। पार्टीलाई रक्तसञ्चार कसरी गर्ने? तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म गाउँगाउँमा पार्टीको एक्टिभिटी हुनुपर्‍यो। विभागहरु बन्नुपर्‍यो। योजना बनाउनुपर्‍यो।
भनेपछि महाधिवेशनमा तपाईँ हस्तक्षेप गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?
नेतृत्व सुम्पने छाँटकाँट सभापति देउवाको देखिँदैन नि?
नेतृत्वका लागि अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त तपाईँ?
सबैभन्दा पहिले आफ्नो घर ठीक पार्नुपर्‍यो। शेखर दा हुनुहुन्छ। सुजाता छिन्। सुजाताले मलाई स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन, भनेकी छिन्। शेखर दा’लाई भन्नुछ- ‘तपाईँलाई जति रहर छ। मलाई रहर छैन।’ यो मेरो एक किसिमको राजनीतिक बाध्यता छ।
त्यसपछि प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्‍यो। रामचन्द्र दाइलाई भन्नुपर्‍यो। उहाँले यसपटक ‘म पनि लड्दिनँ। शेरबहादुरजीलाई पनि नलड्नुस्’ भन्नुभएको थियो। अनि रामचन्द्र दाइलाई भन्नुपर्‍यो। उहाँ असीको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। अर्जुननरसिंह केसी हुनुहुन्छ। रामशरण महतजी हुनुहुन्छ। सबैसँग कुरा गर्नुपर्‍यो। सबैसँग कुरा गरेर अघि बढ्छु। मलाई लाग्छ म सक्छु।
युवा नेताहरुलाई कसरी एड्जस्ट गर्नुहुन्छ त?
नेविसंघमा अहिले बुढाबुढा छन्, कामै छैन। एक्टिभाइज गर्नुपर्‍यो। तरुण दल छ त्यो सिस्टम बसाल्न सक्नुपर्‍यो। पार्टीलाई कसरी संगठित गर्ने यही चुनौती छ। मान्छेलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्‍यो। योजना कसरी तर्जुमा गर्ने? धेरै च्यालेन्जिङ भए पनि सम्भावना पनि धेरै छ।
यस्तो बेला पार्टीमा कारबाहीको कैची चल्यो भने राप्रपाबाट नेता भित्र्याउने काम पनि भयो। किन यस्तो देखिएको हो?
नेकपा पार्टीभित्रको कलहलाई काँग्रेसले कसरी हेर्छ?
यति ठूलो विवाद भयो। धेरै नराम्रो भयो, प्रचण्ड ओलीजीको। यो राष्ट्रकै लागि नराम्रो हो। पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको हो उहाँहरुलाई। हाम्रो कर्तव्य के हो भने हामीले ७० वर्षपछि संविधान दियौं। यो संविधानको रक्षा कसरी गर्ने? अहिले त सरकारले संविधानमाथि नै हस्ताक्षेप भइरहेको छ। न्यायापालिकामाथि नै हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यो राम्रो कुरा होइन।
पार्टीको झगडाको गुत्थी सुल्झाउन शीतल निवासले भूमिका खेलेको विषय पनि चर्चामा छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
भारतीय राजदूत त्यसैगरी हिँडेको भए कस्तो बबन्डर हुन्थ्यो? हाहकारी हुन्थ्यो। चिनियाँले जस्तै भारतबाट काँग्रेसलाई प्रशिक्षण चलेको भए के भइसक्थ्यो होला? यो राम्रो भएन।
छिमेकीसँग समदुरी हुनुपर्छ। यति तिक्तता भइसक्यो भारतसँगको सम्बन्ध त्यसलाई सम्हाल्न धेरै समय लाग्छ। ओलीजी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, राम नेपाली हुनुहन्छ भनेर। यस्तो उट्पट्याङ कुरा गरेर हुन्छ?
यत्रो नेभरली कन्ट्री थियो। सम्बन्ध यसरी चकनाचुर पारिदिनुभयो ओलीले। यस्तोमा अब कसरी वार्ता गर्ने लिम्पियाधुराबारे?pahiopost